राज्यले जनताका साझा विषयको हल गरोस्, जनता संघर्षमा जानै पर्दैन : मिश्र — Harpraharnews.com
दमक, २७ कार्तिक ।
प्रवीण मिश्र (क. मनिष) नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको भूमिगत माओवादी आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा विद्यार्थी राजनीतिबाट माओवादी आन्दोलनमा सहभागी युवा नेता हुन् । उनी अहिले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव ‘ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, सुनसरी जिल्लाको कार्यालय सचिवका रूपमा कार्यरत छन् । पेट्रोलियम पदार्थमा हालै भएको मूल्यवृद्धिलाई लिएर नेकपाले कार्तिक ३० गते नेपाल बन्द आह्वान गरेको छ । यसै विषयमा मिश्रसँग हरप्रहर न्यूजले गरेको संक्षिप्त कुराकानी प्रस्तुत छ :
तपाईहरुको पार्टीले किन नेपाल बन्द आह्वान गरेको ?
दलाल संसदीय सत्ताका ठेकेदारहरुले सत्ता स्वार्थका लागि देशलाई दाऊमा राखिरहेका छन् । नागरिकहरु कोभिड कहर, प्राकृतिक विपत्तिबाट भन्दा राज्य आतंक, घुसखोरी, दलाली र दलगत फोहोरी स्वार्थको चंगुलमा फसेका छन् । अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको चरम र मनमौजी मूल्यवृद्धिका कारण जनता निस्सासिएर मर्ने अवस्थामा छन् । राष्ट्रियता इतिहासकै कमजोर अवस्थामा छ, नागरिक सुरक्षाको अनिभूति छैन । यस्तो अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थमा मनलाग्दी पटक–पटक वृद्धि गरेर सरकार जनविरोधी हर्कत देखाई रहेको छ । हाम्रो पार्टीसँग भएको ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयनलगायत यावत समस्या समाधानका खातिर राज्यको ध्यानाकृष्ट गर्नका हेतु अन्य संघर्ष सहित कार्तिक ३० गते नेपाल बन्दको आह्वान गरेका हौं ।
जनताको राहतको लागि भनेर नेपाल बन्द ! जनतालाई नै सास्ती दिने आन्दोलन गर्नु गलत भएन र ? दवाव दिनैका लागि अरु विकल्पका आन्दोलन पनि त गर्न सकिन्थ्यो नि ?
जनता दलाल व्यवस्थाले थोपरेका बेथिति र हत्खण्डाको बिरुद्ध संघर्ष गर्न तयार छन्, गरि पनि राखेका छन् । जनताका जायज विषय सम्बोधन गर्नु त परै जाहोस्, सरकार सुन्न समेत तयार छैन । बरु रातारात जनदमनको तयारीमा छ । त्यसैले जनताले सत्ताको ध्यान केन्द्रित गर्नका खातिर गरेको संघर्षले सास्ती हैन समस्याको निधानको वाटो खुलाउने हामीलाई विश्वास छ । जनता १ दिनको बन्दले भन्दा सत्ताले आफूअनुकूल गरिराखेको हर्कतद्वारा आजित छ । हामिले आह्वान गरेको घोषित संघर्ष हाम्रो मात्रै कुरा हैन, यो देश र जनताको विषय हो । त्यसैले जनताको पक्षमै हामी, हाम्रो पार्टी र आम जनसमुदाय छ । राज्यले जनताका साझा विषयको हल गरोस् जनता संघर्षमा जानै पर्दैन ।
नेपाल आयल निगमले त घाटापूर्तिकै लागि भाउ बढाइएको भन्छ । फेरि तपाईहरुको विरोध किन ?
यो कदापि हुन सक्दैन । ४७ रूपैयाँमा नेपाल आइपुगेको पेट्रोल कसरी १३६ माथि लगेर थोपरिन्छ ? दलालहरुले सरकारी निगम, संस्थानहरुमाथि आजदेखि होइन, पालैपालो विगतदेखि नै ब्रमलुट गरिराखेका छन् । त्यसको प्रतिविम्ब मात्र हो यो । रातारात दलालहरुले बोनसका नाममा, भत्ताका नाममा ब्रमलुट गर्ने अनि घाटा देखाएर जनताको ढाड सेक्ने ? नागरिकलाई सर्वसुलभ र सहज माल÷वस्तुको उपलब्धता गराउनु राज्यको दायित्व हो ।
बन्द आह्वानसँगै यसको विरोधमा जनस्तरबाट व्यापक विरोध पनि त आइरहेको छ नि ?
जनताका आवाजहरु बुलन्दित गर्दा आफ्नो दानापानि कटिन्छ कि भनेर दलाल, कमिसनखोर र भ्रष्टहरु बर्बराउनु खासै नौलो कुरा होइन । हामीलाई पूर्ण विस्वास छ कि जनता जनसंघर्षको विरोधमा नभई जनसंघर्षको पक्षमा छन् । दलाल सत्ता र त्यसका आसेपासेहरुको हतास बर्बराहट लाई विरोधको रूपमा बुझ्नु जनताको पक्षमा हुँदैन ।
अन्तयमा तपाईको केही कुरा ?
अन्त्यमा, म यो संघर्ष कुनै पार्टी विशेषको कुरा नभएर यो त जनताको न्याय, समानता र अधिकारको कुरा हो भन्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छु । राज्यको जनविरोधी कुकृत्यको अन्त्यका लागि हो यो संघर्ष । त्यसैले घोषित संघर्षका सबै कार्यक्रम सहित कार्तिक ३० को नेपाल बन्द सफल हुने दृढ विश्वास व्यक्त गर्दछु ।
तामाङ पत्रकार संघ मोरङमा अनुप